Shan waxaa ka hara shan – Biyacade
Shan waxaa ka hara shan
Waa qeeyb kale ee tirooleeyda shanley ah.
1) Caalimka waxaa ka hara cilmigiisa.
2) Faylasuufka waxaa ka hara afkaartiisa.
3) Dagaalyahaynka waxaa ka hara furashadiisa.
4) Nebigana waxaa ka hara risaaladiisa.
5) Nabad-doonkana waxaa ka hara saaxiibadiisa.
Previous Shan naagtaada ayaa kuugu nacda
Next Shan janna lagu galaa